12 Su'aalo Sex Women qarsoodi doonaysaa Jawaabaha Si
Haweenka hadal Private: 12 Su'aalo Sex Women qarsoodi doonaysaa Jawaabaha Si
MOWDUUCYADA:12 Su'aalo Sex Women qarsoodi doonaysaa Jawaabaha Sisu'aalo Sex	Posted By: Fisayo
Aynu noqon baxsheen halkan, waxaa jira su'aalo xuduud on galmada haweenka in aad ka cabsadeen inay weyddiiyaan baxay ugaga. Iyagu ma ay weydiisan kartaa saaxiibka ama nimankooda, oo hubiyo in xitaa ma weydiisan kartaa haweenka in ay sababta oo ah waxay sidoo kale ka xishoodaan in ay jawaabo ka doonayaa inuu waxaas oo dhan waa. Laakiin ha ka welwelin, ma waxaad yeelan doontaa in Google jawaabo mar dambe sababtoo ah su'aalaha ayaa dhamaantood la weydiiyay iyo xaq halkan jawaabay.
Ma suurogalbaa in yeeli guska aan nolosha la wadaago ee marka galmada xooggan?
Jawaabtu waa haa. Nin guska aan la sameeyey ee lafta ama birta, waa in weel engorges dhiig at kicinta, sidaa darteed haweenka firfircoon on top dhaawici kara wax ka haddii ay aad u firfircoon oo ku saabsan baaskiil ku. Waxaa leexin karo oo xitaa keeni dhaawac guska, sidaa darteed waxaa wanaagsan in isdeji, sababtoo ah xubnaha la soo gaari karaan iyo buriyay fool xun ka dib markii qaliin lagu saxayo.
Ma suurta kondhomka si dhaco gudaha iga?
Waa arrin aad u caadi ah in cinjirka Simbiriirixiyey off marka galmada firfircoon laakiin tani dhif dhacaya. Waxa ugu fiican ee qof dumar ah ku samayn karin waa in ay dib u soo ceshano samir caag ah, ka dibna loo hubiyo in ay ka kooban tahay lama daadanayaa. Cinjirka noocan oo kale ah waa in aan mar dambe la isticmaali laakiin mid cusub. Dhacdadan ayaa inta badan u dhacdaa iyadoo nin hanti aad u yar.
Maxay tahay sababta aan ku adag tahay in la gaaro idinkoo Junub marka galmada?
aadan wax qalad ah waxaad la aha in aad haddii aad ku guul dareysato in ay gaaraan Junub marka galmada. Runta waxa ay tahay in dumarka qaarkood Junub marka galmada, kuwo kale inta lagu guda jiro kicinta clitoral, weli dadka kale iyada oo loo marayo siigaysiga, iyo kuwa kale via isku-dar ah hababka kale ee. Waxaa si kastaba ha ahaatee waa in lagu tilmaamay in qof dumar ah oo u baahan habboon is-kalsooni iyo kalsooni sariirta si ay u gaaraan boosaska mar kasta; oo waxaa wanaagsan in uu sii joogo off daroogada tan iyo kuwaas saameyn ku yeelan kartaa libido iyo jawaab galmada.
Maxaad Waxaan dareemayaa baahida loo qabo in kaadinayso marka galmada?
Well, runta waa in dareen ah inay kaadido waa kaliya dareen, dhif uusan qof la kulmaan baahida loo qabo in kaadinayso marka galmada. Khubarada odhan markay qof dumar ah oo uu dareensan yahay ayay u baahan tahay inay kaadido marka galmada, waxay ka dhigan tahay iyada oo lab ah waxaa sidoo kale la garaaco iyada G-bar iyo this dhow keeni doonaa iyada u dhow Junub.
Maxaan sameyn karaa oo ku saabsan marka aan siilka ka dhigaysa codadka marka galmada?
Tan waxaa loo yaqaannaa queefing oo run ahaantii waxaa jira in yar in wax aad sameyn karto oo ku saabsan. Waxay dhacdaa marka hawada ku xayiran gudaha "foorno" Badbaaday sida aad ku dhuftay inta lagu jiro galmada, iyo waxa ay sidoo kale si degdeg ah dhici karaa ka dib galmada. Waxa uu leeyahay waxba kuma laha in aad wax dabacsan ama dhagan.
Kama qoyan marka galmada. Maxaan sameeyaa?
Haweenka intooda ugu badan ka heli qoyan hoos inta lagu jiro galmada galmada iyo kacsiga, laakiin wetness this dhimin karaa sida ficilka galmada helo dheer. Wetness u fududaynaysa aad nin si aad dhex gasho oo waxay ka hortagtaa yeeli marka galmada, laakiin haddii aadan ka heli qoyan inta lagu jiro galmada ama galmada, markaas waa inaad sidoo kale laga yaabaa in ay isticmaalaan saliid ah sida jelly a Vaseline si aad naftaada saliidayn.
My lamaanahaaga doonayo dabada ah. Miyaan raali?
Waa in aad raali ka kaliya haddii aad caadi la tahay ama aad rabto in aad tijaabiso. Laakiin haddii, waa in aad lamaanahaaga fahmo sababta. Haddii aad go'aansato in aad aado, markaas waa in aad isticmaasho wax badan oo jelly Vaseline ama labeen oo kale si ay gacan uga baxay oo hubi inaad isticmaasho kondhom si ay u ilaaliyaan ka bakteeriyada iyo feaces inta lagu jiro ficilka. Cinjirka waa in la bedelaa in midkiinba midka kale haddii aad rabto in aad ka futada u baddashaan siilka si looga hortago in bakteeriyada agagaarka wareejinta.
Maxay ka dhigan tahay naag in ugu tuujisid?
Squirting waa version dhaddig oo nin ee shahwada. Dumarka ugu tuujisid marka galmada ama siigaysiga marka ay ka daran ismaandhaafka iyo ka kaadi sii daayo dheecaanka. Sidaasi ma dhacdo waqtiga oo dhan at waana in aan lagu khaldin kaadida, ma ahan.
Uu guska waa qalooca. I caawi!
Waxaa caawimi karin halkan looga baahan yahay haddii dabcan uu cudurka Peyronie ee kaas oo keena nin ee guska in la geesba sabab u ah waxa ku dhaawacmeen marka galmada. Laakiin rag badan ayaa geesba penises oo taas micnaheedu ma aha wax, Dhab ahaantii ay isaga caawin kara in aad ku dhuftay in meelaha midig marka uu galo. Dabcan, nin leenahay kala duwan, muuqaalo, iyo midabkiinaba, marka ay timaado in ay hub - sida haweenku ay tirada siilka iyo naasaha oo kala duwan, muuqaalo, iyo midabbo.
Waxaan is on marka daawashada lulataaye lesbian jeestay.
Tani waxay dhacdaa in haweenka qaar ka mid ah oo ay muuqato kuwa kale off. Waayo, dumarka is on markii uu daawaday laba gabdhood jeestay yeela in lulataaye, waxaa macnaheedu ma aha waxay sidoo kale dooni ama rabto in aad hesho saaxiib la gabar kale ama naag. Sida qof dumar ah oo ku saabsan fantasize laga yaabaa deris laakiin marnaba ma waayi fal dhab ah galmada isaga la.
Maxaan samayn karaa haddii uu guska waa xaq aad u weyn ama xitaa aad u yar?
Ma jiraan wax aad sameyn karto, laakiin in ay ka hadlaan arrintan wada - gaar ahaan haddii aadan dareensaneyn wax ka yar ama mid weyn oo aad xanuun marka galmada. Laakiin wax kale: waxaad isticmaali kartaa saliid fara badan haddii uu hubkiisa uu yahay mid aad u weyn iyo sidoo kale waxaad noqon kartaa on top si aad u yeerin Muddadii xafladdu la xubin weyn; iyo mid yar, aad nin isku dayi kartaa jagooyinka kala duwan ama isticmaali faraha iyo afka uu idin raalli.
Waxaan rabaa in lamaanahayga iyo inuu sii adkeeyo afka ila.
Haddii taasi waa waxa dibna aad rabto in aad waa in aad tusi. Rag badan ma jecla in ay halkaas nuugi laakiin waa in aad istus istaahila by isagoo nidaamsan oo cusub guriga hoos. Haddii uu ma wanaagsana ee afka, markaas waa in aad caawiso oo ay isaga siiyo Maldahan on mooshinka, xawaaraha iyo cadaadiska uu codsan karo in lagu qaybo xasaasi ah oo aad godkii.
Qodobka By Sam
Wixii dheeraad ah oo ku wargelin, waxtar leh, oo si fiican loo darsay waxyaabaha caafimaadka iyo jir dhiska mariyo, booqasho www.HealthFitnessResource.com
Be the first to comment on "Haweenka hadal Private: 12 Su'aalo Sex Women qarsoodi doonaysaa Jawaabaha Si"
Wax macno ah ma haddii aad tahay nin ama naag: sonkorta xad-dhaaf waa shar idiin ah, iyo waxa ay dishaa…